Flip Skater 1.26 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.26 လြန္ခဲ့ေသာ4လက
ဂိမ္းမ်ား အားကစား ဂိမ္းမ်ား Flip Skater
Flip Skater ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင့်ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ကိုရွေးချယ်ပါနှင့် Halfpipe အပေါ်တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားစရာစီးနင်းများအတွက်အဆင်သင့်ရ! အဓမ္မအထွဋ်ရောက်ရှိဖို့မြန်နှုန်းမြင့်မှာရိုးကိုဆင်းတွန်းနှင့် Planet ကိုအပေါ်ကိုအကောင်းဆုံးစကိတ်ဖြစ်လာ!
အများဆုံးအံ့သြဖွယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ်တွင်ကမ္ဘာလုံးခရီးသွားအပေါင်းတို့နှင့်တကွကမ္ဘာ့ကျော်ကသင်၏စကိတ်ပုံနှိပ်ထားခဲ့ပါ! နှာခေါင်းသိမ်းဆည်းမှုများကိုတရားဝင်, ဒုံးပျံလွှင်, frontside လွှင် - - အမြင့်ဆုံးရမှတ် Beat နှင့်ကမ္ဘာ့ရန်သင့်အရူးကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသအံ့သြဖွယ်လှည့်ကွက်ပါ
NOW က Flip စကိတ်စီး Download!
ကမ္ဘာ့ခရီးသွားနှင့်စကိတ်စီးရန်သင့်အကြိုက်ဆုံးတည်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ! မိုင်ယာမီကမ်းခြေကနေရေကန် Baikal ရန်, သင်တို့အဘို့အမရရှိနိုင်ပါရိုး၏အမျိုးမျိုးအပေါ်ယူပါ!
ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ကြီးမားသောတွေအများကြီးထဲကနေသင်အကြိုက်ဆုံးဘုတ်အဖွဲ့ Pick! သငျသညျစတိုင်စကိတ်စီးခြင်းသေချာပါစေ! သင်သည်သင်၏ရမှတ်အမြင့်ဆုံးသေချာအောင်ပျဉ်ပြားများအတွက်အဆင့်မြှင့်တင် Unlock!
သင့်ရဲ့ Streak ကိုလှိမ့စောင့်ရှောက်ဖို့ရူးသွပ်လှည့်ကွက်ပေါင်းစပ်သော့ဖွင့်ခြင်းနှင့် Perform! အန္တရာယ်အရှိဆုံးလှည့်ကွက်ကွပ်မျက်ခြင်းနှင့်ရူးသွပ်အထွဋ်သို့ရောက်ရှိနေဖြင့်အမြင့်ဆုံးရမှတ် Beat!
စူပါအေးဇာတ်ကောင်အစုတခု Unlock & Upgrade! ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စာရင်းဇယားအဖြစ်တိုင်းဇာတ်ကောင်, သေချာသင်သည်ထိုသူတို့အားလုံးကြိုးစားကြစေ! သူတို့ကသင့်အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်!
Flip Skater အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Flip Skater အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Flip Skater အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
appsfather စတိုး 33 28.3k
Flip Skater ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Flip Skater အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.26
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.miniclip.com/privacy
App Name: Flip Skater
Release date: 2018-11-29 10:52:02
လက်မှတ် SHA1: 2A:21:91:89:D8:39:EC:97:93:C3:01:0E:B4:FF:3C:1F:8A:7D:30:46
Flip Skater APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ